Soo ogow marinka qalcadaha Loire ee Faransiiska | Bezzia
Wadada qalcadaha Loire ee Faransiiska
Susana Garcia | 28/04/2021 10:00 | nololeedka, safarka
Haddii aad haddaba ka fekereyso safarkaaga soo socda, ma seegi kartid qaar ka mid ah soo-jeedimahayaga. Waxaa jira meelo had iyo jeer naga sii dayn doona layaab, maxaa yeelay waxay umuuqdaan kuwo laga soo qaatay sheeko. Wadada qalcadaha Dooxada Loire ee Faransiiska Waa mid ka mid ah bogaggaas oo aan cidna uga tagaynin danayn la'aan. Waa mid ka mid ah jidadka ugu jacaylka iyo cajiibka badan ee lagu samayn karo Faransiiska iyadoo la ogyahay aag ay ka buuxaan qalcado qurux aan caadi ahayn.
Goorma waxaan ka hadleynaa qalcadihii Loire Waxaan ka hadleynaa dhismayaashaan oo laga helay qeybta hoose ee koorsada Webiga Loire ee bartamaha Faransiiska. Qaar badan oo ka mid ah qalcadahaas ayaa asal ahaan ka soo jeeda qarniyadii dhexe, oo loo dhisay qalcado dhab ah, in kastoo markii dambe la wada abuuray chateaux, kuwaas oo loogu talo galay inay degaan hoygooda Maanta qasriyadan waxay ka mid yihiin Goobaha Dhaxalka Adduunka.
1 Diyaarso booqashadaada
2 Qasriga Sully-sur-Loire
3 Qasriga Chenonceau
4 Qalcadda Chambord
5 Qasriga Villandry
6 Qasriga Chaumont
Aagga Dooxada Loire waxaan ka heli karnaa in ka badan konton qalcadood, taas oo adkeyneysa in dhammaantood la arko. Taasi waa sababta waxa sida caadiga ah loo sameeyo ay tahay liistada leh qalcadaha xiisaha ugu weyn leh, samaynta waddo lagu daboolayo iyaga. Inta badan waxay ku yaalliin inta u dhexeysa magaalooyinka Angers iyo Orleans, sidaa darteed marinka badanaa waxaa laga sameeyaa midba midka kale. Ku waqtiyada ugu fiican waa xilliga guga iyo deyrta, marka cimiladu wanaagsan tahay, maadaama aadan booqan karin oo keliya qalcadaha, laakiin sidoo kale agagaaraha kaymo, beero ama beero canab ah.
Qasrigan qarnigii XNUMXaad waa mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka wanaagsan sida qalcad difaac oo dagaalada. Waxay ku wareegsan tahay moat oo waad ku socon kartaa socodkiisa ama gudaha u geli kartaa si aad u aragto qabriga Earl of Sully ama jir duug ah qarnigii XNUMXaad.
Tani waa mid ka mid ah qalcadaha ugu quruxda badan ee Loire iyo sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu caansan. Waa a Qalcaddii qarnigii XNUMXaad ee loo yaqaan 'qalcaddii dumarka' sababo la xiriira isbedelada ay ku sameeyeen haween kala duwan waqti ka dib. Waxay leedahay mid ka mid ah gudaha gudaha kuwooda ugu quruxda badan qurux badana ku leh banaanka iyadoo leh codkeeda cad, turretyada iyo jardiinooyinka. Intaas waxaa sii dheer, ururinta muhiimka ah ee rinjiyeynta farshaxanada sida Rubens ama Murillo ayaa nagu sugeysa gudaha.
Kani waa qalcaddii kale ee caanka ahayd ee ay ahayd inaad horay u hesho albaabka laga soo galo si aan looga tegin la'aanteed. King Francis I ayaa adeegsaday keymo qurux badan oo ku xeeran si loo ugaadhsado waana mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn Webiga Loire oo leh in ka badan afar boqol oo qol. Waxay na siineysaa tusaale weyn oo ah Renaissance Faransiis waxayna leedahay jaranjaro weyn oo gudaha ah oo ay yiraahdaan waxaa naqshadeeyay Leonardo da Vinci.
Jardiinooyinka ugu quruxda badan qalcadaha Loire waxay umuuqataa in laga helay Qasriga Villandry. Qasrigan waxaa la dhisay intii lagu gudajiray Renaissance wuxuuna leeyahay beero aad iyo aad u ballaaran oo runtii layaab leh kuwaa oo ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Faransiiska. Waxay leeyihiin naqshado iyo mawduucyo kala duwan oo ku saabsan saddexda heer ee dabaqyada.
Tan waxaa laga helaa kuwa kale ee ugu muhiimsan ee ay tahay inaanan marnaba ka boodin. Qalcaddan waxaa iska lahaa Catherine de Medici oo ahayd oo la dhisay qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad. Waa qalcad weyn oo leh jardiinooyin u eg Ingiriis iyo shaqooyin farshaxan. Waa qalcad si caddaalad ah loo soo celiyey oo leh munaarado calaamadeysan oo u eg kuwa qalcaddii sheekooyinka caadiga ah. Intaa waxaa sii dheer, laga soo bilaabo dhulkeeda waxaad ka arki kartaa muuqaal qurux badan oo muuqaal ah oo ku saabsan Dooxada Loire.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Wadada qalcadaha Loire ee Faransiiska
Urka Basasha, sideen uga takhalusi karaa si wax ku ool ah?
Maxaa la sameeyaa haddii rafiiqa uusan ku qiimeyn